Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo dhagax dhigay dib u dhiska safaaradda Soomaaliya ee Kenya. - Wargeyska Faafiye
.Warka, Headlines .
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa maanta dhagax-dhigay dib u dhiska dhulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi.
Munaasabad ka dhacday dhismaha safaaradda ayaa waxaa ka qeybgalay ra’iisul wasaaraha, xubno ka tirsan golihiisa wasiirrada, madaxweynaha maamulka Jubba iyo ganacsato.
Safiirka Soomaaliya u fadhiyo Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in muddo ay socotay qorshaha dhismaha safaaradda, oo uu xusay in ay ku baxeyso kharash badan oo loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay gacan ka geystaan, wuxuuna intaas ku daray in marka dhismaheeda la dhameystiro ay u soo guuri doonaan.
Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in dib u dhiska safaaradda ay qeyb ka tahay qorshayaal socda oo safaaradaha dibadda ku yaalla lagu dhisayo, wuxuuna ka ammaanay dadaalkii dheeraa ee loo galay soo celinta dhulka safaaradda, isagoo ka mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geysaneyso dhismaheeda.
Soomaaliya ayaa 2010 ku guuleysatay in gacanteeda lagu soo celiyo dhulka safaaradda, kaddib dacwad muddo socotay oo ka dhalatay markii sagaashameeyadii dhulka laga iibiyey shakhsiyaad ganacsato ah.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMali rebels declare independent 'Azawad'Daawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Kenya: Wajir lawmakers Complain the ID bansShoe-thrower interrupts Breivik trial.5 Nin oo Ajaanib ah oo laga helay Xeebta Kismaayo.